हफिंगटनको साथ हफ | Martech Zone
सोमबार, अप्रिल 18, 2011 शनिबार, अक्टोबर 29, 2011 Douglas Karr
यदि तपाईंले सुन्नु भएन, त्यहाँ एक छ $ १०० मिलियन वर्ग कार्य मुद्दा AOL मा बिक्रि गरेको तर ब्लगरलाई कुनै भुक्तान नगरेको एरियाना हफिंग्टनको बिरूद्धमा जसले हफिंगटन पोष्टलाई त्यस्ता पावरहाउस ब्लगि community समुदायमा विकास गर्न सहयोग पुर्‍यायो। म धनी लेफ्टीको विडंबनालाई छोड्छु अरूको पीठमा एक अर्ब डलरको चौथाई कमाउँदै (आउच!) ... र सीधा बिन्दुमा पुग्नुहोस्।
केटाको रूपमा जससँग 50० भन्दा बढी ब्ल्गरहरू छन् जुन समय-समयमा यहाँ ब्लग गर्दछ Martech Zone, म पूर्ण रूपमा भुक्तान नभएका ब्लगरहरूसँग सहमत हुनुहोस्। तिनीहरू क्षतिपूर्तिको योग्य छन्।
Martech Zone प्रायोजन र विज्ञापनमा केहि पैसा तल तान्छ, तर हामी ती कोषहरूलाई मार्केटि,, डिजाइन, र विस्तारमा पुन: लगानी गर्न जारी राख्छौं। पोडकास्टिङ, ईमेल र भिडियो। हामी साइट गति र स्थिरता सुधार गर्न जारी राख्छौं। त्यसो… यदि तपाईंले यो सबै गणना गर्नुभयो भने, हामी अझै घाटामा अपरेट गर्दैछौं।
र म इमानदारीपूर्वक यो तरिका लाई मनपराउँदछु र घाटामा अपरेट गर्न जारी रहन्छ जबसम्म हाम्रो सामग्री सुधार हुँदैछ र हामी हाम्रो पाठकत्व बढाउँदैछौं। हाम्रा कुनै पनि लेखकहरूले मैले केहि फरक गरेको सिफारिस गरेका छैनन्। म विश्वास गर्दछु कि उनीहरूले स्पटलाइट र ग्रहमा उत्तम मार्केटिंग पेशेवरहरूसँग लेख्ने अवसरको प्रशंसा गरे।
त्योले भन्यो, मलाई लाग्दैन कि यो अत्यन्त गाह्रो मुद्दा हो। एरियाना हफिंगटन र उनको दलले सजिलैसँग कार्यान्वयन गर्न सक्थे विश्लेषण र ब्लगरहरू पहिचान गरे जसले साइटमा सब भन्दा बढि मूल्य (यातायात मार्फत) चलाए। तिनीहरूले विज्ञापन, पदोन्नति, र उनीहरूले गरेको पूर्वाधार लगानीमा केहि आवश्यक लागत विश्लेषण विकसित गर्न सक्दछन्। अन्तमा, म विश्वास गर्दछु कि हफिington्गटन पोस्टले गरेको भए, उनीले आफ्नो ब्लगर्सलाई सबैभन्दा राम्रो मूल्य प्रदान गर्ने परिवर्तनको राम्रो अंशको लागि कुराकानी गर्न सक्थिन्।
त्यो भनियो, एरियानासँग अब एक चौथाई अर्ब डलर छ एक ठूलो रक्षामा लगानी गर्न ... जो सम्भवतः उनीहरूको सेवा सर्तहरू औंल्याउनु भन्दा बढी गर्नुपर्दैन जुन सबैले साइन अप गर्दा सहमत भएका थिए। फोर्ब्स सहमत छन् कि यो एक हो लामो शट.
पक्कै पनि सत्य यो हो कि त्यहाँ छ कुनै हालतमा मुद्दा जित्न सक्दैन। यदि यसले गर्छ भने, फेसबुकको प्रत्येक सदस्यलाई केहि पैसा लाग्नेछ, गुगलमा प्रत्येक खोज इञ्जिन परिणामले उत्पन्न गरेको प्रति क्लिक भुक्तानी हुनेछ, र प्रत्येक ट्वीट ट्वीटरमा केही सेन्टको लायक हुन सक्छ - यी सबै कम्पनीहरूलाई बाहिर चलाउँदै। व्यापार को। हुन गइरहेको छैन। कहिलेकाँही जीवन निष्पक्ष हुँदैन - यी समयहरूमध्ये यो एक हो।
म हरेक व्यवसायलाई यीबाट टाढा हुन प्रोत्साहित गर्दछु मुक्त प्लेटफर्महरू र सुरू गर्नुहोस् मालिक तिनीहरूको आफ्नै सामग्री। यदि तपाइँ सामग्री लेख्नको लागि पर्याप्त प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ जुन एक दर्शकलाई आकर्षित गर्दछ, संसारमा किन तपाईं हफिंग्टन जस्तो कसैलाई दिनुहोस्? यो नगर्नुहोस्! स्क्र्याच गर्नुहोस् र आयमा तपाईंको आफ्नै सामग्री काम गर्नुहोस्। तपाईंको साइटमा त्यो ट्राफिक फिर्ता ल्याउने लक्ष्यको साथ यहाँ र त्यहाँ एक पाहुना पोस्ट गर्नुहोस्। यसैकारण हामी फुर्सद र साइडबारमा स्पष्ट रूपमा हाम्रा लेखकहरू प्रदर्शन गर्न कडा मेहनत गरिरहेका छौं।
अवश्य पनि, यदि AOL खरीद गर्न चाहन्छ भने Martech Zone २ million० मिलियन डलर (वा २$ करोड डलर) को लागी, म साइटलाई सबैभन्दा अधिक मूल्य प्रदान गर्नेहरूले खुशीसाथ डलर निकाल्ने गर्दछु। सामग्रीको मान हुँदैन जबसम्म यसले आगन्तुकहरू ल्याउँदैन। एरियाना हफिंग्टनले केहि ब्लगर्सले ल्याइरहेको मानको मान्यता पाउनुपर्दछ।
अमेजन र W3 कुल क्यासको साथ वर्डप्रेस स्पीड अप गर्नुहोस्